LaTeX ndiyo imwe nzira kune Adobe InDesign? | Linux Vakapindwa muropa
Texstudio inokutendera iwe kuti ugadzire magwaro uchishandisa LaTeX.
Muhunyanzvi, sekumatongerwe enyika kana munhabvu mune zvishuwo. Kunyangwe iri kirabhu, ideology, kana chirongwa chekushandisa, panofanirwa kuve nevanhu vanochida kana kuvenga icho. Vhura komendi mumwe muverengi akanyunyuta kuti handina kukumbira LaTeX seimwe nzira yeInDesign.
Kunyora chinyorwa kunoreva ita zvisarudzo. Chii chinosiyanisa blog kubva kuenisaikoropidhiya ndeyekuti iye anayo muganho wezwi. Kana zvakare chimwe chinhu chinozviisa pasi chinogona kutongwa kunze. Hazvigoneke izvo zvaanofarira nezvaasingadi, kujairira kana kujairira ita chikamu chako. Nekudaro, isu tine fomu yekutaura iwe yekumaka zvikanganiso kana kuratidza dzimwe nzira.
1 Iyo yemahara software nharaunda inopesana neyako software
2.1 Matanho ekugadzira gwaro uchishandisa LaTeX
4 Ndeimwe nzira here kana kuti kwete?
Iyo yemahara software nharaunda inopesana neyako software
Iko kune kumwe kutsika mune yemahara software nharaunda yekutarisa paguvhu. Tine kune rimwe divi avo varitisingazive zvakadzama kana proprietary software kana yemahara software inonyatso dzivirira yechipiri nekuda kwekungova wakasununguka. Boka rechipiri iye anoziva mahara software kwazvo asi haana kunetsekana nekuongorora imwe shamwari yake. Izvo zvakare haina kufarira kune chaiwo madikanwa eboka rega rega revashandisi.
Uye pakupedzisira pane chechitatu, chakaumbwa neavo vanozviziva izvozvo kune software yekudyidzana iri nani kune yakavhurika sosi shamwari, asi nekuda kwezvikonzero zvikonzero haifanire kushandiswa. Ini ndakatanga kusangana nevanhu ava kana ndichitaura kuti semunhu asingaone zvakanaka ndaifanira kuchengetedza Windows. Ini ndaida kushandisa rimwe izwi kuziva software uye paLinux pakanga pasina sarudzo inoshanda, vakandiudza kuti ndiwane munhu anondiverengera.
Zvisinei, chandinosungirwa kuti ndione ndeyekuti LaTeX inoshanda senzira inoshanda kuAdobe InDesign. Kana, kunyora nemazvo, kana paine akavhurwa sosi mapurogiramu anogadzira zvinyorwa zveLaTeX sarudzo yekufunga.
Kuisa makadhi patafura, yave nguva yekuzivisa ivo protagonists.
LaTeX ndiwen mameseji ekuumbwa sisitimu yakanangana nekugadzira zvinyorwa uko typographic mhando iri yakakosha inodikanwa. Inonyanya kushandiswa mumagwaro esainzi ayo anoshandisa zvakanyanya kutaura kwemasvomhu.
Kusiyana neyakajairwa mazwi processor, akavakirwa pane iyo "izvo zvaunoona ndizvo zvaunowana" musimboti, LaTeX yakavakirwa pamirayiridzo.
Pamwe pamwe nekwaniso yayo yekutendeka kubereka equation, mafomula akaomarara, sainzi uye mimhanzi notation, iyo inobvumira rongedza zvirinyore zvinyorwa muzvikamu, zvikamu, zvinyorwa, bhaibheri, analytical indexes, nezvimwewo).
Matanho ekugadzira gwaro uchishandisa LaTeX
Muchikamu chekutanga, zvinyorwa zvinogadzirwa pamwe nemirairidzo yekuti ungazvimiririre sei.
Muchipiri, iwo mirairo yemavara inodudzirwa nemunyori anosiya gwaro rakagadzirira kutumirwa kuprinta.
kuburitsa kwachinopa kunogara kwakafanana, zvisinei nemudziyo (purinda, kuratidza, nezvimwewo) kana sisitimu inoshanda. Mhedzisiro yacho inogona kutumirwa kune akawanda mafomati akadai sePostcript, PDF, SGML, HTML, RTF, nezvimwe.
Adobe InDesign chirongwa che kugadzira zvinyorwa padesktop. Inobvumira gadzira zvese zvakadhindwa zvinyorwa uye zvakamira uye zvinofambidzana magwaro
Panzvimbo pekushandisa rairo sezvakaitika kuLaTeX, zvikamu zvakasiyana zvegwaro zvinoiswa munzvimbo inoenderana uchishandisa mbeva. vanogona kusanganisa odhiyo, vhidhiyo, mharidzo uye mifananidzo. Mhedzisiro inogona kutumirwa kuPDF, EPUB, uye HTML.
Takataura zvisati zvaitika izvo LaTeX inopa zvinogara zvakaenzana zvisinei nemudziyo. Adobe InDesign inobvumira akasiyana marongero uye mavara profiles zvinoenderana nezvakabuda. Izvo zvinogona zvakare kugadziridzwa kune akasiyana screen saizi.
Ndeimwe nzira here kana kuti kwete?
Zvinoenderana nezvinodiwa zveumwe neumwe. Pandakanyora chinyorwa, pfungwa yacho yaive yekupa zvirongwa izvo zvinoita zvakafanana mabasa nenzira yakafanana. Mupfungwa iyoyo LaTeX yekugadzirisa zvinyorwa hazvikodzere seInDesign inoshandisa dhizaini yekuona panzvimbo yemirairo. Ndicho chikonzero kurudziro yangu yaive Scribus. Sezvineiwo, Scribus anogona kupinza magwaro eLaTeX.
Chimwe chinhu ndechekuti mumwe munhu anofunga kuti dhayagiramu uchishandisa mirairo zvirinani pane kuzviita nekukweva zvinyorwa zvemavara kana dialogs.
Tsika ndidzo Kuti tidzivirire sosi yakavhurika isu hatidi kwete chete kuti tizive iyo, asi zvakare kuziva iyo yevanobata. Uye pamusoro pezvose kuremekedza izvo zvinodiwa uye zvinodiwa nevamwe vashandisi, tisingayedze kumanikidza edu kwavari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » LaTeX ndiyo imwe nzira kune Adobe InDesign?
Mhoroi, ini ndichatora iyo yekumaka kukanganisa:
Mushandisi uyo akataura mune imwe posvo, haana kugunun'una nekuti hauna kumbobvunzurudza LaTeX seimwe nzira, asi izvo zvaakaita kuwedzera runyorwa rwake rweimwe nzira, uye cherekedza kuti zita repositi raishaya chimwe chinhu chingaratidza izvozvo dzimwe nzira, dzaive dzimwe nzira dzako.
Ini ndakanyora mhinduro mune yekutanga.
Uye paunenge uchinyora zvakanaka, ndakakurudzira mune mamiriro ndichishandisa chirevo "Ini ndaizowedzera" uye kwete mukumanikidza kana kuratidza sezita remusoro watinogona - uye isu takatadza - kunamata.
Izvo zvisina kukosha kana iko kutsvedza kwerurimi, uye kunyangwe kushoma kana ichiedza kuve yakasarudzika yeavo vataurwa uye / kana kusarudzika yeavo vakakanganikwa nesarudzo kana kusaziva.
Pano ndiri kungonyora kusimbisa kuti iwe unofanirwa kuverenga usati wanyora, sevaperekedzi vedu vanogara vachidzokorora kwatiri isu vaongorori.
Lyx kuFOSS neBakoma vachibhadhara, uye kwete zvishoma, mifananidzo yakajeka yeLATEX, iyo yanga ichishandiswa kuronga nyanzvi mumapepanhau, magazini uye zvinyorwa zvekudhinda ZVAKANAKA kubvira kutungamirwa kwakasiiwa.
Ndokureva, kushandisa LATEX haina kubatana nekusashandisa graphic edhita mune ino kesi, mukuwedzera kune ese WYSIWYG ane zvakakwana zvakakwana.
Uye kune akawanda maturusi maturusi kuenda uye kubva kuLATEX, kazhinji ekunze, nekuti LATEX inoshandiswa kweLAYOUT, ndiko kuti, kuti gwaro ripurindwe muchinyorwa kana kudhinda zvinhu zvine huchokwadi.
PS: Ini zvakare ndinoshandisa Scribus neInkscape, zvinoenderana nebasa kana chikamu chayo zvishandiso zvekushandisa uye usati washandisa Lyx yezvinyorwa zvesainzi uye / kana kupurinda mabasa.
Chinhu chakanaka nezveLatex mahara uye ine zviuru zvezvisarudzo,
Asi, kunze kwekunge iwe waita chimwe chinhu chakanyanya kukosha, kunamatira kune template, uchafanirwa kutsvaga paInternet zviuru zvenguva maitiro ekuita zvaunoda, unofanirwa kugadzirisa zvinhu zvakawanda uye hazvisi chaizvo zvaunoda.
Ini ndanyora chinyorwa changu muLatex, uye ndakanga ndambochishandisa kwakawanda shit. Ndakaita chinyorwa mumakore mana uye ndinogona kutaura kuti kwavari ndakatsaurira mwedzi mina izere kuLatex, yakawandisa.